Kwadoro: Otu esi achọta tokens ndị ahụ na-eme X100 tupu oge agafeela? - Cazoo
Kwadoro: Otu esi achọta tokens ndị ahụ na-eme X100 tupu oge agafeela?
Mbido » Mbido » Kwadoro: Otu esi achọta tokens ndị ahụ na-eme X100 tupu oge agafeela?
Tag: Nnyocha nke Binance, BSCSCAN, achicha, akwụkwọ, YBỌR., EtherSCAN, GitHub, ICO, Okpokoro, usoro nkwenye, Medium.com, Messaria, Nkwekọrịta Smart, staking, Ntughari, akara ngosi, X100, Youtube
Oge ogugu: 11 minuti
N'ihe banyere cryptocurrency enwere ike ọnweghị ihe dị mkpa karịa "Mee nyocha nke aka gi".
Mee nyocha nke onwe gi, ka ndị na-asụ Bekee kwuru. BỌR..
Enwere ọtụtụ ozi n’ebe ahụ ma ọ nwere ike isiri ike ịghọta ihe dị adị ma nwee ikike, ihe dị adị na enweghị oke ike, ma ọ bụ ihe dị ebe ahụ na-eche ịdọpụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ime n'ezie, ịkwesịrị ịmụ etu esi eme nyocha gị - ka anyị hụ otu ị ga-esi chọpụta ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe mkpuchi iji zere ma ọ bụ ikekwe ijide ya.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-agụ ibe ndị a, a na-anabata gị, ma ọ bụ nabata. N'ebe a, anyị na Cazoo na-edegara Cazoo akwụkwọ iji mee ka echiche akụ na ụba siri ike, nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na karịa echiche niile nke teknụzụ n'uche. Ọ bụ akwụkwọ ozi m chọrọ ka m na-akọrọ gị, enwere m obi ụtọ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbara gị uru. N'ezie, ọ bụrụ na otu ụbọchị ị debanyere aha Binance gịnị kpatara ya koodu ntinye m? Anyị abụọ ritere uru na ya, anyị abụọ 20% ego na discountlọrụ. Gịnị mere!
Ma abughi m onye ndumodu ego. Anaghị m adụ gị ọdụ ka esi etinye ego gị. Anaghị m enyere onye ọ bụla aka iji netwọkụ a dị ebube nke blockchains na dapps. Itinye ego gị n’ego na ime ka ịmị mkpụrụ bụ ihe onye ọ bụla na-atụ anya ya, ọ bụrụ n ’ọ bụrụ ụzọ ị chọrọ ịga, naanị ndụmọdụ m nyere bụ iji nlezianya mee ya.
Otu Index na-esote dị ka ọ dị na mbụ, yabụ ị nwere ike ịgafere ngalaba nke kachasị masị gị. Agbanyeghị, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị gụọ ya niile.
Agba nke 1: Oru ahia
Nkeji 2: Nchoputa mbu
Agba 3: Nyochaa isi mmalite
Nzọụkwụ 4: Ugboro abụọ ego: abụọ ego
Nkeji 5th: Akụkọ na RoadMap
Nzọụkwụ mbụ ịmalite nyocha banyere mkpuchi kacha mma X100 ga-eme n'ime izu abụọ bụ ịjụ onwe gị: mkpụrụ ego a na-arụ ọrụ ego? Ahụla m ọtụtụ ọrụ nkwa cryptocurrency, naanị iji chọpụta etu ego si dị n'ahịa ma the ọ nwụọla maka ọnwa ma ọ bụ ọbụlagodi afọ.
Gaa na saịtị dị ka coinmarketcap.com ma ọ bụ coingeko.com iji hụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ego dị ndụ, ọ bụrụ na enwere ọrụ ọ bụla, azụmahịa emere ya, jide n'aka na ịlele ọnụahịa azụmaahịa na etu ọnụahịa si agagharị.
Ọbụghị naanị na akara aka ahụ kwesịrị ka edepụtara ya na Exchange yana ezigbo aha, mana ọnụọgụ azụmaahịa na ahịa ahụ kwesịkwara ịdị oke elu, m ga-ekwu ihe dị mkpa: ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-ahụ onwe gị ịkwụ ụgwọ 'adịchaghị nhọrọ kemgbe akwukwo akwukwo ha ekwesighi ịgbasa ego zuru ezu.
Ọ bụrụ na akara aka ị na-ele anya bụ akara ngosi usoro iwu ERC20, nke a na-ere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na DEX dị ka Uniswap, jide n'aka na ị ga-akpachara anya, ebe ọ bụ na DEX enweghị ntụle ọnụahịa na-enweghị atụ. Ihe a niile abụghị ihe kpatara ịhapụ ọrụ, mana ọ bụ ihe ị ga-ebu n’uche ka ị na-aga n’ihu.
Ọnụahịa bụ isi, mana ọ bụghị ihe niile. Ka anyị chee na cryptocurrency ị họrọla nwere ezigbo nkwado akụ na ụba. Ọ bụ oge iji mata ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ.
Youtube bụ n'ezie ezigbo ebe ịmalite. Mana enwere ogbaaghara. Ọ bụ ya mere ndụmọdụ m ji gbanwee Messaria, Nnyocha nke Binance, na site na nlekota oru ICO dika Okpokoro. Mee ka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ: Mgbe ị na-eji ihe ndị a eme ihe, jide n'aka na ị ga-edetu ma detuo ajụjụ ọ bụla ị nwere. Ugbu a ị gaghị achọ ha, ị gaghị ahụ azịza ha. Mana ugbua ị naghị achọ inweta azịza ndị ahụ kama ị na-amalite njem.
Messari: Akara akara ngosi profaịlụ
Messari bụ ngwaọrụ dị ike na ị nwere ike iji nyochaa cryptocurrencies. Akụkụ m chere na ị kwesịrị inwe mmasị na ya bụ nke profaịlụ crypto nke masịrị gị. Mụ nwoke ndị Messari na-eme nyocha zuru oke nke gunyere akụkọ ntolite cryptocurrency, akara ngosi, na oke akara aka. Ha na-abịa n'ọkwa zuru ezu n'ụzọ doro anya na ọbụlagodi usoro iheomume nke mmepe gara aga na nchịkọta ego yana ụzọ maka ọdịnihu nke ọrụ ahụ.
Dee aha ndi nile choro n’ime oru a, ya bu nchoputa ya na onye isi ha (na-eche na ha abughi otu onye) .. i gha acho ha.
Nnyocha nke Binance
Nyocha Binance mere kama ha na-eji uzo oru uzo ozo nyocha ihe ngosi. Inyocha ihe nke a na - enye aka nke ukwuu inye aka, ịghọta isi ihe dị na crypto na otu o si arụ ọrụ.
Ihe di uku banyere nyocha nke Messari na Binance meputara bu na nihi na ha bu ndi Hollywood kpakpando na oghere crypto, a na-atụ anya ọkachamara dị elu nke ọkachamara n'aka ha. Ha abughi nani ehi mara abụba: ihe omuma banyere Messari na Binance abughi oge. You nwere ike ọ bụghị n'ezie ata ha ụta: ha na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ… ma nke ahụ bụ dịkwa mma kwa. Ọ bụrịrị ụra mbụ na-agwa gị: ewerela ihe ọ bụla nke ndị ọzọ dere dị ka ọla edo dị ọcha, dị ka ihe ngọpụ iji kwụsị nyocha gị niile, ọbụlagodi na amaara isi iyi ahụ nke ọma.
Saịtị nyocha ICO, dị ka Icodrops, bụ ụdị igwe oge: maka ụfọdụ crypto ha emeela ihe oyiyi ochie na akwụkwọ na-adịkwaghị na weebụsaịtị. Yabụ ọ dị mfe ịchọpụta ma ọ bụrụ na ọrụ mkpuchi agbanweela ụzọ ọ na-aga, ma ọ bụ ọ bụrụ naanị na ọ na-anwa ili ihe gara aga. O di nwute na ego nile etinyere site na Icodrops na saịtị ndi yiri ya abughi ihe ziri ezi, ma na-etinye ego nile eweputara ma na ntinye ego na otutu ICO. Cheta na ị na-achọkarị onyonyo ma ọ bụ eserese ebe ị nwere ike ịhụ mmebi nke akara aka ahụ, otu esi anakọta ego na ebe enyere akara ndị ahụ.
Messari nwere ezigbo ọrụ nke ịdebe akara aka na ntinye - ị nwere ike ịgafe ozi a na Icodrops iji mee ka o doo anya etu ọrụ crypto nyere si mee ka isi obodo ya bawanye. Ihe ị na-achọ ebe a bụ akara aka nke anaghị eme ka ịchọọ ịgba ọsọ .. ọkachasị ịchọrọ ijide n'aka na imirikiti akara aka enyere ma ọ bụ nke a ga-enye dị n'aka nke obodo ma ọ bụghị n’akpa ndị guzobere ọrụ ahụ! Ndị jidere ọtụtụ tokens nwere ike ịre mgbe ọnụahịa bidoro ịrị elu, nke ga-egbochi mkpụrụ ego ahụ ịba ụba na uru.
Dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụghị na ọ bụrụ na ọnọdụ a adalata, ọrụ niile bụ ọrụ iji tụfuo. Mana ị ga-akpachara anya mgbe ị hụrụ ihe oyiyi dị ka nke a, na-enyocha tokenomics nke crypto na Binance Research ma ọ bụ Messari:
Oge Mbupute SOL Token
Ugbu a ị enyochala ihe niile, oge eruola ịlaghachi na Youtube. Ebe ọ bụ na ị tụkwasịrị obi na crypto, ugbu a ị nwere ezigbo nghọta banyere ya, ka anyị nụrụ ihe ndị kere ya nwere ikwu. Chọpụta aha ị chetara ide, aha ndị bụ isi ndị ọrụ ahụ metụtara. Ọrụ ọzọ gị ga-abụ ịchọta ajụjụ ọnụ kachasị nso ha mere. Debe ha n'usoro oge ha wee lelee ka ị nwere ike!
Inghụ bụ ikwere: Ikiri ajụjụ ọnụ a na-ahụ ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ọrụ crypto ị na-eso na-enye akụ dị oke ọnụ nke ozi ị gaghị ahụ ebe ọ bụla. Ọzọkwa, ajụjụ ọnụ ndị a na-enyere m aka nke ukwuu ịghọta ihe ndị na-arụ ọrụ nke ọrụ m nwere ike isiri m ike ịghọta naanị site n'ịgụ akwụkwọ ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na achọtara na saịtị crypto. Mgbe ị nọ ya, lelee profaịlụ LinkedIn iji hụ ma ha nwere nzere dị mma. Ọ bụrụ na ha rụrụ ọrụ na Google ma ọ bụ Microsoft ọ dị mma? Ee, ọ bụrụ na ego ọrụ agaghị ọnwa ole na ole. Ọ bụrụ na a chụrụ ha n'ihi na ha na-egwupụta crypto, mgbe ahụ gimme ise! Chọọ ọwa Youtube nke ego mkpuchi ị nwere mmasị na ya! Ọ bụrụ n ’ọkaibe n’ ime nchọcha, ị ga - ahụ obere vidiyo na - akọwa isi ihe ndị ahụ.
Nke a na-agbakwunye usoro abụọ ọzọ maka ọchụchọ ahụ: eziokwu nlele, oge niile, ihe niile ị mụtara ruo ugbu a, ma gbalịa ịghọta ihe na-echere n'ọdịnihu nke mkpuchi a.
Nzọụkwụ 4: Ugboro abụọ ego: nyocha abụọ
You banyelarị na ebe nrụọrụ weebụ crypto ka ọtụtụ ozi ju gị? Chọrọ ịgụ naanị ebe obibi na ngalaba ozi. Otutu ihe omuma banyere otu ebe a na-achota crypto bu ihe ndi nzuzu. N'ụzọ doro anya, azụmahịa ụlọ akụ na azụmaahịa na-abụghị ego ma ọ bụ ihe ọma ọzọ ha na-ekwu na ha na-akwado. Imirikiti ọdịnaya dị n'ozuzu ha abaghị uru ma ọ gaghị enyere gị aka ịchọpụta ma ọrụ ahụ kwesịrị ka ị lebara anya. Nke kachasị mkpa, ị nwere ike ịmefu ọtụtụ oge na-agagharị na saịtị ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ị na-achọ. Ma ebe ọ bụ na ị chetara ide aha aha ndị bụ isi nke ọrụ a ma ị dee ajụjụ niile ịchọrọ azịza ... ọ ga-abụrịrị oge iji nyochaa na ihe niile ị mụtara ka na-emetụta ma na-edozi ajụjụ gị. bilitere kemgbe ị malitere nyocha gị.
Pancakeswap Akwụkwọ: docs.pancakeswap.finance
Nwere ike ịchọta ọtụtụ azịza site na-egwu ala n'ime ngalaba a raara nye Documentation .. ma eleghị anya, ị nwere obi ụtọ ma nwee ebe nchọta ma ị nwere ike tinye okwu dịka akara ngosi, onu oriri, ICO, usoro nkwenye, Ngwuputa, staking na isiokwu ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịmatakwu nkọwa. Enweghị nchọta ọ bụla? Chọọ site na aka.
Atụla egwu ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe ọ bụla ozugbo - akwụkwọ ederede crypto na-abụkarị onye nrụpụta. Ọtụtụ n'ime ibe ndị ahụ ga-enwe akara koodu. Ichezọ koodu ahụ, gụọ ihe edere tupu oge emechaa na mgbe emechara. Ọ na-abụkarị koodu ederede ederede kachasị ike.
Akwụkwọ ọzọ ị ga-achọ na saịtị crypto bụ -acha ọcha akwụkwọ: chọọ ngalaba metụtara akara ngosi. Chọọ maka onye nyocha nke blockchain nke crypto. Ọ bụ ERC20 Token? Gaa na Etherscan. Ọ bụ BEP20? Gaa na Bscscan.
Ndị jidere akara aka $ CAKE
N'ebe a, ị nwere ike ịlele ngwa ngwa ndị kachasị nwee akara aka, ị nwere ike ịhụ ya na eserese achịcha!
Anyị ekwuola ya: kpachara anya ma ọ bụrụ na enwere obere akpa na-ejide 90% nke tokens na mgbasa. Mana nke ahụ abụghị mgbe niile: ọ na - eme na obere akpa ị hụrụ n’elu ndepụta ahụ, nke nwere ọtụtụ akara ahụ, bụ Nkwekọrịta Smart, nke ejiri ya maka ihe dịka staking.
Ọ bụrụ na mkpuchi gị abụghị akara ERC20, enwere olile anya na onye nyocha ha na-egbochi ya ga-enye gị ohere ịhụ ndepụta zuru oke nke jidere akara ahụ. Ọ bụghị ha? UBUA AHU.
Ugbu a ị meela nyocha dị ukwuu banyere crypto ịchọrọ itinye ego na ya, ọ bụ naanị otu ihe na-efu: ịchọ mmelite dị mkpa nke ọrụ ahụ, ma ha na-abịa, eme atụmatụ, ma ọ bụ na ha emeworị.
Maka akụkụ ikpeazụ nke nchọta crypto gị ị ga-achọ ihe atọ: otu Mazọ okporo ụzọ, a blog na akụkọ na-adịbeghị anya .. M na-akwado, n'usoro a: na-abụkarị akụkọ bụ nchịkọta nke ihe ha dere na blog.
Pancakeswap blog na akụkọ
Jiri ozi ọma ị gụrụ na obere akwụkwọ: ha nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na post blọgụ ha na-ezo aka toro ogologo ma ọ bụ gbagwojuru anya igwu.
Ka anyị kwuo ugbu a gbasara RoadMap.
Na ahụmịhe m, cryptocurrency RoadMaps na-adịkarị nghọta ma anaghị enye ozi anyị na-achọ n'ezie. Ikiri ajuju ajuju ajuju nke ndi hiwere ya na ndi isi oru ya g’enweta ihe nghota n’iru oru ha karie ya RoadMap. Na ezigbo crypto, ị ga-ahụ ụzọ mara mma nke nwere ebumnuche ziri ezi, nke a ga-enweta tupu ọrụ ahụ agwụ ego ma ọ bụ bibie asọmpi ahụ. Ọ bụrụ n ’ịhụghị RoadMaps ọ bụla ma ọ bụrụ n’ajụjụ ọnụ ndị ị na-ele adịghị enye gị mmetụta na ọrụ ahụ ga-adịru ogologo oge… ikekwe ị na-ele ego na-ezighi ezi.
Ọdịnihu abụghị ihe niile dị mkpa: chọpụta ma ọ bụrụ na ha enwetala ihe ha kwere nkwa ime ruo taa .. na-abịa blog.
Igwe kpakpando nke stellar: stellar.org
Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịchọta blọọgụ na weebụsaịtị nke crypto, enwere ike ịchọta ya na ha ọkara. Oge ndị ọzọ ị ga-aga chọgharịa nke ha gitHub iji hụ ọganihu ha .. site na nke ahụ ị nwere ike ịjụ onwe gị ma ọ bụrụ na ọrụ a na-aga n'ihu n'ụzọ achọrọ.
Nchọgharị site na isi akụkọ blọọgụ nke ọrụ crypto dị nnọọ oke iji nweta echiche nke ma ọ bụ eziokwu n'okwu ya yana ntuziaka ọ na-aga. Ọ dị mma ịga mgbe ahụ gụọ akụkọ ahụ dum ma ọ bụrụ na mmelite ahụ na-ekwu maka mmelite dị mkpa dịka ndị metụtara mgbanwe na tokenomics ma ọ bụ ọkwa ọ bụla na-ekwu maka nnukwu mmekorita.
Dị ka ihe ikpeazụ, mepee taabụ ọhụrụ ma mepee ụfọdụ saịtị akụkọ cryptocurrency dị ka Cointelegraph, Coindesk ma ọ bụ Decrypt ma gbalịa ịchọta ụfọdụ isi okwu raara nye ọrụ ị na-achọ. Ahụghị ihe ọ bụla? Nke ahụ abụchaghị akara ọjọọ ma e jiri ya tụnyere mgbasa ozi ọdịnala, ndị mgbasa ozi ụwa crypto na-eme ihe n'ụzọ nke aka ha, ọ naghị amasị ha mgbe niile ịkọ isi akụkọ gbasara ihe ndị dị mkpa na-eme.
N'oge a ị kwesịrị ịnwe ozi niile ịchọrọ iji wee mee mkpebi dị mma na ihe mkpuchi nwere ezigbo uru ma jikọta ya na ọrụ ziri ezi. Ọ bụrụ na ịnweghị ezi mkpebi maka ya, ọ nwere ike ịbụ na ị na-arụ ọrụ iji lezie anya, ma ọ bụ ọbụna ịnọpụ. Ọ dị njọ iche maka ya, mana ọ nwere ike ịpụta na ị ga-alaghachi, laghachi na eserese eserese, ma lelee akụrụngwa ndị ị jiri mee nyocha gị.
Inyocha crypto bụ ọtụtụ ọrụ. Mana jụọ onwe gị: awa ole na ole nyocha ọ bara uru maka nloghachi 100x na ntinye ego gị? … ..… ..… ..
Mana Cazoo! Zmasị Cazoo, kedu ka ị si eme nyocha crypto gị?
Mee ezigbo Cazoo
PRIMO: M na-aga coinmarketcap ma ọ bụ coingecko iji hụ ma ọ bụrụ na akara ngosi ahụ na-arụsi ọrụ ike, ọkacha mma na mgbanwe ndị a pụrụ ịdabere na ha. Mkpụrụ ego ahụ anwụọla ka ọ na-anwụ? Anaghị m egbu oge.
dị ka: M na-aga Youtube wee hu ihe ndi ozo kwuru banyere oru ngo a, ma were ihe ole na ole ma oburu na odi uru.
Nke atọ: lelee nchọpụta Messari na Binance, iji nweta echiche doro anya nke ihe na ihe ọrụ ahụ bụ yana otu o si arụ ọrụ. Ana m ede ihe, ana m amalitekwa ịjụ ajụjụ ole na ole na aha ndị malitere ya.
Kwado: lelee Icodrops ka ị hụ ego ole ọrụ ahụ jisiri ike bulie yana etu esi nye onyinye ndị a. M na-eji isi mmalite ndị na-egosi yana Messari iji nyocha abụọ na nkọwa ndị edepụtara ziri ezi.
Nke ise: M na-alaghachi na Youtube na-ele niile ajụjụ ọnụ m nwere ike, n'etiti ndị kasị nso-nso, mere na CEO ma ọ bụ nchoputa nke oru ngo. Ọtụtụ mgbe ihe ha na-ekwu na-aza ọtụtụ ajụjụ m dere na nke abụọ: ha na-emekwa ka ọtụtụ ihe m chere bụrụ ihe mgbagwoju anya banyere teknụzụ eji. Achọrọ m ọwa Youtube nke crypto, ma ọ bụrụ na ọ dị ya ọ na-enyekarị nghọta na nkọwa ndị ọzọ. Na-eche na ihe niile m chọpụtara emebeghị ka ịnụ ọkụ n'obi m belata,
N'ozi: Gwuo n'ime akwukwo oru ngo. Achọrọ m nkọwa ọ bụla na teknụzụ nke crypto ahụ, usoro nkwekọrịta, tokenomics, ịkwụ ụgwọ ụgwọ, ihe ndị a chọrọ, na isi ihe ndị ọzọ m mụtara ugbu a.
Nke asaa: Ana m esegharị n'okporo ụzọ ha na blọọgụ iji hụ ma ha enweela ọganihu ha kwere na nkwa ma ọ bụrụ na ha ga-ewulite ma wepụta ihe ọ bụla ha chọrọ iji mee ka ọrụ ha gaa n'ihu.
Atosɛm: lelee ma ọ bụrụ na azụmahịa ha emeela akụkọ na oghere crypto nwere nnukwu akụkọ na-akpali akpali na isi ndị na-ebipụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na enweghị nnukwu akụkọ, lezienụ anya! Ma eleghị anya, anyị nọ n'oge dị oké mkpa nke ọrụ ahụ, anyị rutere ebe ahụ tupu ndị ọzọ.
Usoro a nke m maka ime nchoputa nkpuru ego nke oma abughi mgbochi. Mana maka m ọ bụ ngwakọta zuru oke nke nyocha, ịgụ na ikwugharị.
Ọ dị mfe ichefu na ụwa nke cryptocurrencies bụ ubi ọhụụ, ọtụtụ ka dị na nwata. Yabụ, ọ bụrụ na ị mụta ka esi eme nke ọma na nyocha nke crypto-gị ugbu a ị ga - abụ otu n’ime mmadụ ole na ole maara n’ezie ihe na - eme mgbe FOMO kụrụ ahịa dị egwu ... dị ka ọ mere na nso nso a, Eprel 22, 2021 , mgbe nkwupụta sitere n'aka Onye isi ala Biden.
Isiokwu ọzọKedu ihe na-agbapụ na ụwa nke Cryptocurrencies?